ကလေး ဘဝထဲ က ပျောက်သွားတဲ့ သားလေး ကို ( ၃၂ ) နှစ်ကြာချိန်ထိ ဇွဲမလျော့ တမ်း ရှာခဲ့တဲ့ မိခင် – Let Pan Daily
ကလေး ဘဝထဲ က ပျောက်သွားတဲ့ သားလေး ကို ( ၃၂ ) နှစ်ကြာချိန်ထိ ဇွဲမလျော့ တမ်း ရှာခဲ့တဲ့ မိခင်
ကလေးဘဝ က တည်း က ပြန်ပေးဆွဲခံ ခဲ့ ရ တဲ့ လူတယောက် ဟာ နှစ်ပေါင်း ၃၂နှစ် အကြာ မှာ သူ့ မိဘရင်း တွေ နဲ့ ပြန်တွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့ နောက် နာမည်ကျော်ပြ န်ပေးဆွဲမှု ဟာ အဆုံးသတ် ခဲ့ ပါ တယ် ။
Mao Yin လို့ အမည် ရ တဲ့ သူ ဟာ ၂နှစ်သား အရွယ် ကတည်း က တရုတ်နိုင်ငံ Shaanxi ပြည်နယ် ရဲ့မြို့တော် Xian မှာ ပျောက်သွား ခဲ့ တာဖြစ် ပါ တယ် ။ ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ သူ က သူ့ အား ၁၉၈၈ ခုနှစ် မှာ ကလေး မွေး စား ချင် နေ တဲ့ တခြား မိသားစု ထံ ရောင်း စား ခဲ့ တာ ပါ ။
မွေးစား မိဘတွေ က သူ့နာမည် ကို Gu Ningning လို့ အမည်ပြန်ပြောင်းပေးခဲ့ ပါတယ် ။ လက်ရှိ မှာ အိမ်အလှပြင်ဆင်ရေး လုပ်ငန်း ကို လုပ်ကိုင်နေ တဲ့ Mao ဟာ ဟာ မေလအစော ပိုင်း မှာ Xian ရဲဌာနရဲ့ မျက်နှာခန့်မှန်းမှု နည်း ပညာ အသုံးပြုကာ Scan ဖတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရ ပါ တယ် ။ အဲဒီကနေ တဆင့် DNA စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်အပြီး မှာတော့ သူဟာ ကလေးငယ် တယောက် နဲ့ DNA တူနေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ ရ ပါ တယ် ။
ရဲဌာနဟာ ကလေးပျောက် တိုက် တန်းပြီး သူ့ကလေး ကို ဇွဲမလျော့တမ်း ရှာဖွေလျက် ရှိ တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ Li Jingzhi ထံအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်စွာပဲ အဲဒီနေ့ဟာ တိုက်ဆိုင်စွာပဲ မိခင်များနေ့ဖြစ်နေ ပါတယ် ။ ဝမ်းသာလုံးဆို့ကာ ငိုနေရင်း နဲ့ “ဒါဟာ အမေများနေ့မှာ ကျွန်မရရှိ လိုက်တဲ့ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ပါလို့” ဆိုခဲ့ ပါတယ် ။
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အပြီး မှာတော့ သားဖြစ်သူ ကို နှစ်ပေါင်း ၃၀ကျော်ကြာ ခွဲသွားရတဲ့ မိဘနှစ်ပါးဟာ ငိုကာ သားဖြစ်သူကိုဖက်ရင်း နောက်ထပ်မခွဲချင်တော့ဘူး လို့ ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ် ။ သားဖြစ် သူကလည်း သူ့ ရဲ့မိဘရင်းတွေနဲ့ ပဲ
သူ့ကို ပျောက်ဆုံး သွား ခဲ့ချိန် က ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဖြစ်ပြီး Jinling အမည်ရဟိုတယ်အနီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရေသွားသယ်တဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ လိုက်သွားရင်း ဖခင်မမြင်လိုက်တဲ့ မိနစ်အနည်းငယ် အတွင်း မှာ ပျောက်သွားခဲ့တာဖြစ် ပါတယ် ။ အဲဒီ အချိန်က တည်း က စလို့ မိဘ နှစ်ပါး ဟာ နေရာအနှံ့ သွားကာ အမြဲလိုလို သားဖြစ်သူကို လိုက်လံရှာဖွေနေခဲ့ကြ ပါတယ် ။
သားဖြစ်သူကို လိုက်လံ ရှာဖွေရင်း လူပျောက်ကြော်ငြာလက်ကမ်း စာစောင်ပေါင်း ၁သိန်းကျော်ကို ရောက်ရာနေရာမှာ ကပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁ နှစ် ၂နှစ် ကနေ ၁၀နှစ်အထိ သဲလွန်စ တစုံတရာမှ မတွေ့ခဲ့ရေ ပမယ့် သူတို့ဇွဲမလျှောက် ခဲ့ပဲ သားပျောက် ကို ရှာဖွေခဲ့ကြ ပါတယ် ။
မိခင်ဖြစ်သူ Li ဟာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်လို့ တီဗီ အစီအစဉ်ပေါင်းများစွာမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံအနှံ့ မှာ ပျောက်ဆုံးသွား ခဲ့တဲ့ ကလေးပေါင်းထောင်ချီရဲ့ဖြစ်ရပ်ကို လူအများသိစေဖို့ လှုံဆော်မှုတွေ မရပ်မနားပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ် ။ တနေ့နေ့မှာ သားဖြစ်သူ ဟာ ဒီအစီအစဉ် ကို ကြည့်မိလိမ့်မယ် လို့ သူမ မျှော်လင့်ခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
This photo taken on May 18, 2020 shows Mao Yin (R) reuniting with his mother Li Jingzhi (C) and father Mao Zhenping (L) in Xian, in China’s northern Shaanxi province. – A Chinese man who was kidnapped asatoddler 32 years ago has been reunited with his biological parents, after police used facial recognition technology to track him down. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)
သားဖြစ်သူကို ရှာဖွေနေရင်း နဲ့ပဲ မိခင်ဖြစ် သူ Li ဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ကလေးငယ်တွေကို လိုက်လံရှာဖွေပေးနေတဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းကြီးတခုဖြစ်တဲ့ Baby Come Home မှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အဲဒီ မှာ ပျောက်ဆုံးသွား တဲ့ကလေးငယ်ပေါင်း များစွာ ကို ခြေရာခံ ရှာဖွေပေးခဲ့ ပါတယ် ။ အဲဒီမှာ သူဟာ ကလေးငယ်ပေါင်းများစွာကို ပြန်လည်ကယ်တင်ကာ မိဘရင်းတွေ နဲ့ ဆုံစည်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီး မိသားစုပေါင်း ၂၀ကျော် ကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့ ပါတယ် ။
” ဆယ်စုနှစ် ၂ခုကြာအောင် ကျွန်မသား ကို ရှာခဲ့ တယ် ။ ကျွန်မဘယ်လောက်နေရ ထိုင်ရ ခက်ပြီး စိတ်ထိခိုက်ရတယ် ဆိုတာ ကျွန်မ ကိုယ် ကျွန်မ သိပါတယ်။ တခြားကလေးပျောက် မိဘတွေ လည်း ကျွန်မလိုပဲခံစားကြရ မှာပါ ။ ဒါကြောင့် ပျောက်သွား ခဲ့တဲ့ ကလေး တွေ ကို ကျွန်မ အစွမ်းကုန် ရှာဖွေခဲ့တာပါ ” လို့ သူမက ဆိုပါတယ်။
သူမရဲ့ သားပျောက်ရှာ ခရီးရှည်ကြီးမှာ တွေ့နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့ နေရာပေါင်း ၃၀၀ကျော်အထိ မမောတမ်းသွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ပေမယ့် ၁ခါမှ မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ ရှာဖွေရင်းနဲ့ နေရာအနှံ့က ရဲစခန်းတွေ ကိုလည်း ထပ်ခါထပ်ခါသွားကာ သားဖြစ်သူရဲ့အချက်အလက်တွေကို ပေးကာ အမြဲတစေ တိုက်တွန်းနေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့ သူမကို သားဖြစ် သူ ကို ပြန်လည်တွေ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ရဲဌာနက အကြောင်းကြားလာခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း ၃၀ကျော် သားဖြစ်သူ ကို ဇွဲမလျော့တမ်းရှာဖွေနေ ခဲ့တဲ့ မိခင်ခဗျာ ဘယ်လောက်ဝမ်းသာလိုက်လေမလဲ။ ရဲဌာနရဲ့ စစ်ဆေးမှုအရ သားဖြစ်သူကို ပြန်ပေးဆွဲခဲ့သူဟာ ၆၀၀၀ယွမ် ( ၈၄၅ဒေါ်လာ ) နဲ့ ရောင်းစားခြင်းခံခဲ့ရ တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ သားဖြစ်သူဟာ စီချွမ်ပြည်နယ်က မွေးစားမိဘတွေထံမှာပဲ သူ့ဘဝတလျှောက်လုံးကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာဖြစ် ပါတယ် ။
၂၀၀၉ ခုနှစ်ကစလို့ တရုတ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝ န်ကြီးဌာနဟာ ပျောက်ဆုံး ကလေးတွေ ကို ပြန်ရှာဖွေရာမှာ အထောက်အကူပြုစေ မယ့် DNA စနစ် ကို တရုတ်နိုင်ငံ တလွှား မှာ ဖြန့်ထားပေး ခဲ့ပါတ ယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတော့ Reunion ဆိုတဲ့ အွန်လိုင်းထောက်လှမ်းခြင်း စနစ်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး ဒီစနစ်ကြောင့် ပဲ ပျောက်ဆုံးကလေး ၆၃၀၀ခန့်ရှိတဲ့အနက် ၄၃၈၅ ဦးကို ပြန်လည်ရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။